၂၀၂၁ မှာ ရပေနျးစားလာမယျ့အလုပျအကိုငျမြား
သငျကအခုမှ သငျ့ Career Path ကိုရှေးခယျြမယျ့လူလား? ဒါဆိုရငျတော့ အခုပွောပွမယျ့ ၂၀၂၁ မှာ ရပေနျးစားလာမယျ့အလုပျအကိုငျတှကေို သိထားဖို့လိုမယျနျော။
အားလုံးသိတဲ့အတိုငျး ကိုဗဈကွောငျ့ ကမ်ဘာ့စီးပှားရေးလုပျငနျးတှထေိခိုကျတဲ့အပွငျ စီးပှားရေးလုပျငနျးအားလုံးလညျး တဈဆဈခြိုးပွောငျးလဲသှားရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ၂၀၂၁ မှာ အလုပျအကိုငျရှာဖှမေယျ့လူတှအေနနေဲ့ အခွအေနအေရပျရပျကို သုံးသပျလလေ့ာပွီးစဉျးစားဖို့လိုပါတယျ။ ဒါဆို ၂၀၂၁ မှာရပေနျးစားလာမယျ့အလုပျတှကေဘာတှလေဲ။
(၁) Hybrid Role
တကယျဆိုရငျတော့ "Hybrid Role" ဆိုတာ ရာထူးတဈခုရဲ့ခေါငျးစဉျ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒီ "Hybrid Role" ဆိုတာ ရပေနျးစားလာမယျ့ အလုပျတှရေဲ့ထိပျဆုံးကို ရောကျရှိနရေတာပါလဲ??? ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ Covid ရဲ့ တိုကျခိုကျမှုကွောငျ့ ကမ်ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျး အမြားစုက လုပျငနျးတှထေိခိုကျခဲ့တယျ။ ဝငျငှတှေလြေော့နညျးလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီ့အတှကျ 2021 မှာ လုပျငနျးတှအေောငျမွငျဖို့ရာ ပွနျလညျပွီး အားယူလညျပတျရမယျ့အခြိနျဖွဈပါတယျ။ ဝငျငှထေိခိုကျလာတာနဲ့အမြှ ကုမ်ပဏီတဈခု (သို့) လုပျငနျးတဈခုမှာ ဝနျထမျးအမြားကွီးခနျ့မယျ့အစား စှယျစုံရဝနျထမျးအနညျးငယျနဲ့ ပွနျပွီးလညျပတျဖို့ကို အဓိကအလေးထား စဉျးစားကွမှာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီ့အတှကျ လုပျငနျးပိုငျးဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြမှု ပိုမိုအားကောငျးတဲ့ "Hybrid - စှယျစုံရ" သမားတှအေတှကျ အခှငျ့အလမျးတှေ ပိုကောငျးလာမှာပါ။
ဥပမာ - Administrative Assistant ရာထူးလို့ဆိုပမေယျ့" Admin နဲ့သကျဆိုငျတဲ့ ရုံးတှငျးပိုငျးတှရေော၊ HR နဲ့သကျဆိုငျတဲ့ ဝနျထမျးရေးရာပိုငျးတှရေော" ကြှမျးကငျြတဲ့သူမြိုးတှေ ပိုမိုလိုအပျလာပါလိမျ့မယျ။
(၂) Digital Marketing Specialists
ဒီနခေ့တျေမှာ နညျးပညာတှတေိုးတကျလာတာနဲ့အမြှ စီးပှားရေးပုံစံတှေ၊ ကွျောငွာပုံစံတှေ၊ ကုနျပစ်စညျးတှကေို ထိုးဖောကျတဲ့ပုံစံတှေ အမြားကွီးပွောငျးလဲလာပါတယျ။ "eCommerce Platforms" တှလေညျး အမြားကွီး ပျေါပေါကျလာခဲ့တယျ။ စီးပှားရေးလုပျငနျးတိုငျးက လလှေိုငျးပျေါကို ရောကျရှိလာပါတယျ။ အသကျအရှယျအပိုငျးအခွားမရှေး Social Media မှာပဲ ပြျောမှလေ့ာကွတဲ့အခါ လုပျငနျးရှငျတှအေနနေဲ့ သူတို့စိတျဝငျစားတဲ့အရာတှနေဲ့ စားသုံးသူတှကေို ဆှဲဆောငျရတဲ့ နညျးလမျးတှကေ ပွောငျးလာခဲ့ပါတယျ။။ ဒါကွောငျ့ Social Media ကို ပိုငျနိုငျတဲ့ Digital Marketing သမားတှကေို လိုအပျလာမှာဖွဈပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာ မငျးအနနေဲ့ "SEO" "Google ads" ကြှမျးကငျြမှုရှိလားဆိုတဲ့ JD တှကေို အမြားဆုံး တှမွေ့ငျရပါလိမျ့မယျ။
(၃) Graphic Designers/Creatives
ဒီအလုပျကလညျး ၂၀၂၁ မှာတျောတျောရပေနျးစားလာမယျ့အလုပျတဈခုဖွဈပါတယျ။ အကယျ၍သငျက Creativity ပါတဲ့ အလုပျကိုလုပျခငျြကိုငျခငျြစိတျရှိတဲ့သူဆိုရငျတော့ ဒီအလုပျကသငျနဲ့အကိုကျညီဆုံးဖွဈမှာပါ။ ခုတညျးက သခြောလလေ့ာလိုကျစားပွီး ပွငျဆငျထားလိုကျပါ။
(၄) Marketing Strategists
ဒီရာထူးကလညျး ၂၀၂၁ မှာခတျေစားလာမယျ့ အလုပျတှထေဲက တဈခုအပါအဝငျပဲဖွဈပါတယျ။ "marketing strategies" "identifying the best messaging & creative concept" "executing the strategy" တှေ ရေးဆှဲတာတှကေ ရပေနျးစားလာမှာပဲဖွဈပါတယျ။
(၅) Data Analysts
အခုနောကျပိုငျးမှာ လုပျငနျးရှငျတျောတျောမြားမြားက Data (အခကျြအလကျ)ရဲ့အရေးကွီးပုံကို အာရုံစိုကျမိလာကွပါတယျ။ ခုခတျေမှာ ရပေနျးအစားဆုံး ဥပမာတဈခုအနနေဲ့ဆိုရငျ - Facebook Page တဈခုထောငျရငျတောငျ ထောငျပွီး ပွီးရော၊ ရောငျးရ ပွီးရောမထားဘဲ Page Insight ထဲက တဈနဘေ့ယျနှယောကျ page ကို ဝငျကွညျ့သလဲ၊ ဘာတှကေို ပိုနှဈသကျကွသလဲ၊ ဘယျအသကျအရှယျတှကေ ပိုအကွညျ့မြားသလဲ စသဖွငျ့ ဒတောတှကေို ဂရုတစိုကျမှတျသားထားတတျကွပါတယျ။
တိကသြခြောတဲ့အခကျြအလကျတှေ၊ Reporting တှေ၊ သသေခြောခြာ စာရငျးပွုစုထားတဲ့ "Analyze Data" တှေ . . .စတာတှနေဲ့အတူ Data Analysts ကလညျး တကယျ့ကို ရပေနျးစားလာမယျ့အလုပျတဈခုဖွဈပါတယျ။
ဒီရာထူးတှအေပွငျ (၂၀၂၁) အတှကျ "High-Demand" ဖွဈနအေုနျးမယျ့ ရာထူးတှကေတော့
(၂) HR Professional
(၃) Operations Manager
(၄) IT Professionals
(၅) Web Engineers တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုရေးပနျးစားလာမယျ့ ရာထူးတှကေို ခနျ့မှနျးခွေ သိရှိပွီဆိုရငျတော့ ကိုယျ တကယျစိတျပါဝငျစားတဲ့ နယျပယျမှာ အောငျမွငျတဲ့သူတဈဦးဖွဈဖို့ရာ လိုအပျတဲ့ သငျတနျးတှေ၊ လကေ့ငျြ့မှုတှေ ပွုလုပျထားဖို့ အကွံပွု တငျပွလိုကျပါတယျ။
သင်ကအခုမှ သင့် Career Path ကိုရွေးချယ်မယ့်လူလား? ဒါဆိုရင်တော့ အခုပြောပြမယ့် ၂၀၂၁ မှာ ရေပန်းစားလာမယ့်အလုပ်အကိုင်တွေကို သိထားဖို့လိုမယ်နော်။
အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ကိုဗစ်ကြောင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်တဲ့အပြင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးလည်း တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ၂၀၂၁ မှာ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေမယ့်လူတွေအနေနဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို သုံးသပ်လေ့လာပြီးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဆို ၂၀၂၁ မှာရေပန်းစားလာမယ့်အလုပ်တွေကဘာတွေလဲ။
တကယ်ဆိုရင်တော့ "Hybrid Role" ဆိုတာ ရာထူးတစ်ခုရဲ့ခေါင်းစဉ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီ "Hybrid Role" ဆိုတာ ရေပန်းစားလာမယ့် အလုပ်တွေရဲ့ထိပ်ဆုံးကို ရောက်ရှိနေရတာပါလဲ??? ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ Covid ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အများစုက လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ခဲ့တယ်။ ဝင်ငွေတွေလျော့နည်းလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် 2021 မှာ လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ဖို့ရာ ပြန်လည်ပြီး အားယူလည်ပတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ငွေထိခိုက်လာတာနဲ့အမျှ ကုမ္ပဏီတစ်ခု (သို့) လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ဝန်ထမ်းအများကြီးခန့်မယ့်အစား စွယ်စုံရဝန်ထမ်းအနည်းငယ်နဲ့ ပြန်ပြီးလည်ပတ်ဖို့ကို အဓိကအလေးထား စဉ်းစားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု ပိုမိုအားကောင်းတဲ့ "Hybrid - စွယ်စုံရ" သမားတွေအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုကောင်းလာမှာပါ။
ဥပမာ - Administrative Assistant ရာထူးလို့ဆိုပေမယ့်" Admin နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ရုံးတွင်းပိုင်းတွေရော၊ HR နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဝန်ထမ်းရေးရာပိုင်းတွေရော" ကျွမ်းကျင်တဲ့သူမျိုးတွေ ပိုမိုလိုအပ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ စီးပွားရေးပုံစံတွေ၊ ကြော်ငြာပုံစံတွေ၊ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ထိုးဖောက်တဲ့ပုံစံတွေ အများကြီးပြောင်းလဲလာပါတယ်။ "eCommerce Platforms" တွေလည်း အများကြီး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းက လေလှိုင်းပေါ်ကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။ အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားမရွေး Social Media မှာပဲ ပျော်မွေ့လာကြတဲ့အခါ လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေနဲ့ စားသုံးသူတွေကို ဆွဲဆောင်ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေက ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။။ ဒါကြောင့် Social Media ကို ပိုင်နိုင်တဲ့ Digital Marketing သမားတွေကို လိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ မင်းအနေနဲ့ "SEO" "Google ads" ကျွမ်းကျင်မှုရှိလားဆိုတဲ့ JD တွေကို အများဆုံး တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီအလုပ်ကလည်း ၂၀၂၁ မှာတော်တော်ရေပန်းစားလာမယ့်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍သင်က Creativity ပါတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်ရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့ ဒီအလုပ်ကသင်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ခုတည်းက သေချာလေ့လာလိုက်စားပြီး ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါ။
ဒီရာထူးကလည်း ၂၀၂၁ မှာခေတ်စားလာမယ့် အလုပ်တွေထဲက တစ်ခုအပါအ၀င်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ "marketing strategies" "identifying the best messaging & creative concept" "executing the strategy" တွေ ရေးဆွဲတာတွေက ရေပန်းစားလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများက Data (အချက်အလက်)ရဲ့အရေးကြီးပုံကို အာရုံစိုက်မိလာကြပါတယ်။ ခုခေတ်မှာ ရေပန်းအစားဆုံး ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင် - Facebook Page တစ်ခုထောင်ရင်တောင် ထောင်ပြီး ပြီးရော၊ ရောင်းရ ပြီးရောမထားဘဲ Page Insight ထဲက တစ်နေ့ဘယ်နှယောက် page ကို ဝင်ကြည့်သလဲ၊ ဘာတွေကို ပိုနှစ်သက်ကြသလဲ၊ ဘယ်အသက်အရွယ်တွေက ပိုအကြည့်များသလဲ စသဖြင့် ဒေတာတွေကို ဂရုတစိုက်မှတ်သားထားတတ်ကြပါတယ်။
တိကျသေချာတဲ့အချက်အလက်တွေ၊ Reporting တွေ၊ သေသေချာချာ စာရင်းပြုစုထားတဲ့ "Analyze Data" တွေ . . .စတာတွေနဲ့အတူ Data Analysts ကလည်း တကယ့်ကို ရေပန်းစားလာမယ့်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရာထူးတွေအပြင် (၂၀၂၁) အတွက် "High-Demand" ဖြစ်နေအုန်းမယ့် ရာထူးတွေကတော့
(၅) Web Engineers တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုရေးပန်းစားလာမယ့် ရာထူးတွေကို ခန့်မှန်းခြေ သိရှိပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ် တကယ်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ နယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ရာ လိုအပ်တဲ့ သင်တန်းတွေ၊ လေ့ကျင့်မှုတွေ ပြုလုပ်ထားဖို့ အကြံပြု တင်ပြလိုက်ပါတယ်။